भ्रष्टको पछि लाग्नेहरु रबीन्द्र मिश्रको बिरोध गर्छन ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	भ्रष्टको पछि लाग्नेहरु रबीन्द्र मिश्रको बिरोध गर्छन ! » Nepal Fusion
भ्रष्टको पछि लाग्नेहरु रबीन्द्र मिश्रको बिरोध गर्छन !
रबीन्द्र मिश्र नेपाली राजनीतिका चम्किलो तारा हुन् । भ्रष्टाचार, वेथिति र अन्यायका बिरुद दरिलो स्वरमा जनताको माझबाटै जनताको सारथि बनिरहेका छन् । रबीन्द्र मिश्र कल्याणकारी लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य र सुसंस्कृत सहितको राजनीति यात्रामा समेत बलियो खम्बा बनिरहेका छन् । मिश्रको लोभलाग्दो राजनीति यात्रा प्रति अंरिङगालहरु रोइ कराइ गरिरहेका छन् ।
मिश्र उबेला हात्तीछाप चप्पल लगाएर अहिले बुट लगाउने हैसियतमा पुगेका होईनन् । उनी उबेलै बुट लगाउथे । उनी राजनीतिमा आउनु अगाडि राम्रो जागिरमा थिए । के गगन थापा, योगेश भट्टराई, जर्नादन शर्मा, बिष्णु पौडेल, बर्षमान पुनले कुनै जागिर खाएका थिए त ? उनीहरु त बिपी, मदनको समाज बदल्ने अभियानमा भबिस्यको स्वार्थका निम्ती पछि पछि लागेका थिए । कुनैबेलाका यीनीहरु हात्तीछाप लगाउनेहरु एका-एक राजधानीमा महल देखि अनगन्ती गाडी सम्म चढ्न थाले । यसको स्रोत के हो ?
लाखौं युवाको सपनाको संसाद बीबीसीको लोभ लाग्दो जागिर छाँडेर, मिश्र लाखौं नेपाली जनताको आशाको केन्द्र बनेर आएका छन् । मिश्रका छोराले बिदेश पढन गएको बास्तविक हो । के मिश्रले राज्यको निकायमा पद धारण गरेपछि छोरालाई बिदेश पढ्न पठाएका हुन त ? यसो होइन ।
रबीन्द्र मिश्र र जर्नादन शर्मा, देबेन्द्र पौडेल संग उनको तुलना गर्न मिल्दैन । शर्मा, पौडेलहरु हिजो बिद्यालय भत्काउदै जनताका छोरा-छोरी युद्ध मैदानमा लान्थे । शान्तिबार्ता पछि, उनी नै छोरा छोरी पढाउन अमेरिका, लण्डन पु¥यान थाले । के यही थियो त युद्धकालको जनबादी शिक्षा ? मिश्रले देशमै राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न अभियान चलाएका छन् । समाज बदल्ने महान अभियानमा छन् । तर युद्ध गर्ने नेताहरु अहिले आफन्त परिवार र आफ्नो आर्थिक बदलिरहेका छन् । मिश्रले कहिलै बिद्यालय भत्काउदै हिडेनन् । देशमै राम्रो शिक्षाको खोजीमा लागे ।
मान्छे चिनौ । भ्रष्टको पछि नलागौ । नेपालको जय होस्